Mora manadino… | NewsMada
Very anjavony sy vitavita ho azy avokoa ary hadino ny zava-misy eto amin’ny firenena. Matory sy miesona am-pitoerana avokoa ny rehetra. « Mora manadino ny vahoaka malagasy », hoy ilay raikalahy taloha. Tsy misy tohiny ilay volamena sarona teny Ivato, ny volana septambra tamin’ny taon-dasa, milanja 24 kilao. Ilay tanora irakiraka no tratra farany. Tahaka izany koa ny momba ilay andremana sarona sy natao mipoapoaka ny vaovao momba azy, tamin’ny herinandro lasa iny. Any am-ponja ny tompon’ny sambo sy ireo irakiraka fa ilay ambara fa tena atidoha sy mpanefoefo, nandrangarangana fampisamborana saingy tsy hita ihany hatramin’izao.
Tsy mifanalavitra amin’izany ny andavandrom-piainan’ny Malagasy. Tsy niverina amin’ny laoniny intsony ny vidim-bary fa nihoatra ny 500 Ar avokoa ny kapoaka. Misy mahazo tombony ao izany. Tsy hita ilay fandraisana andraikitry ny fanjakana. Na raha mandray andraikitra aza, misy ho an’ny sasany. Hatreto, tsy mazava ireo mpandraharaha mpanafatra vary. Iza avy izy ireo ary avy aiza ny vola hanafarana izany ? Hangingina ho azy eo ny momba izany… Efa zatra ampiainana ny an-kinafinafina fa tsy mangarahara isika.
Havily any amin’ny resaka didim-pitsarana ho an’ny mpanao politika iray ny resaka mba hahavariana ny olona sy hanadinoany ny olana iainany andavanandro. Haseho avokoa izao karazana adihevitra tsy mampandroso rehetra izao.
Etsy andaniny, ny vidim-piainana, ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana, ny fitsaram-bahoaka, ny vono olona sy herisetra etsy sy eroa, ny fanolanana… Efa tsy mahataitra intsony. Efa zary lasa kolontsaina sy iainana. Hararaotin’ny mpitondra sy ny mpanao politika izany handaminan-dresaka sy hilazana izao habobo rehetra izao, indrindra rehefa mba mitokana sekoly kely, tokony hotokanan’ny ben’ny Tanàna sy ny sefo distrika.
Ho tonga ihany ny fifidianana ka ho avy indray ny fampanantenana arahin’ny vola kely sy « tee shirt » tsy mahavita taona, nalaina tamin’ny volantsika avy amin’ireo harem-pirenena. Hadino fa nampahantra antsika ireo ary namotika ny firenena. Tsy tia tanindrazana fa nijery ny tombontsoany. Ho tompon’andraikitra koa isika vahoaka amin’izany rehefa tsy mijery lavitra sy manadino…